Masinina gorodona (2) Orinasa - Masinina vita amin'ny tany (2) Mpanamboatra, mpamatsy
Ny masinina amin'ny multi-functional dia mora ampiasaina, azo antoka ary vokany fanadiovana tsara
Izy io dia mety indrindra amin'ny fanadiovana ny karipetra, ny gorodona, ny fandefasana haingam-pandeha ho an'ny karazan-gorodona isan-karazany ary ny fametahana ny vato ho an'ny hotely, trano fisakafoanana, tranon'ny birao ary efitrano fampirantiana.
Ny masinina fanosotra dia milina ilaina hanosorana ny gorodona mafy, masinina hafainganam-pandeha ambany izy (154rpm), rehefa manana loto ao anaty ny gorodonao izay ilainao mametraka hozatra ao anaty fikosehana, tsara kokoa ny mampiasa vahaolana fanadiovana, mihazakazaka ilay borosy diovy ny gorodonao. Ny milina fanosotra multifunctional dia mora ampiasaina, azo antoka ary vokany fanadiovana tsara. Izy io dia mety indrindra amin'ny fanadiovana ny karipetra, ny gorodona, ny fandefasana haingam-pandeha ho an'ny karazan-gorodona isan-karazany ary ny fametahana ny vato ho an'ny hotely, trano fisakafoanana, tranon'ny birao ary efitrano fampirantiana.
Fandraisana an-tanana manitsy ny tanana misy multifunctional mamela asa mora sy mora.
Natao tamina boaty fanamoriana, motera misy capacitor avo roa heny ary hery lehibe izay mahatonga ny milina ho azo antoka sy matanjaka kokoa.
Ny fampifangaroana ny asan'ny mpanadio poleta amin'ny gorodona dia azo ampiasaina amin'ny famolavolana kristaly na fanavaozana ny vato, mety amin'ny toeram-pambolena, fananganana, hotely ary kianja fiantsenana. Izy io dia mety indrindra ho an'ny orinasa mpanadio mba hikarakarana isan'andro sy hikarakarana manokana ny vato.
Ny môtô AC monopole asynchronous dia vita amin'ny vy silikonika mangatsiaka nafarana
ravin-kalitao avo lenta, noho izany dia manana hery avo, fatiantoka ambany ary hafanana. Ny fitaovana reducer withplanetary dia vita amin'ny vy vy misy kalitao avo lenta mba hampihenana ny tabataba sy thegear izay helical dia vita amin'ny POM misy kalitao avo lenta.
Izy io dia manana endrika tsara tarehy sy lamaody ary mora ampiasaina.
Rehefa vita ny savoka ho an'ny famolahana ny gorodona dia mamirapiratra toy ny fitaratra.
Natao hamolavolana ny gorodon'ny karazan-java-hafa rehetra hafainganam-pandeha dia 1500 rpm ny motera voafono tanteraka.